Ny valisoa faha-127 amin'ny Kantonika dia hotanterahina an-tserasera tamin'ny tapaky ny volana jona
Araka ny Filankevi-panjakana sinoa mpanatanteraka fihaonana tamin'ny Aprily 7th, 2020, manoloana ny tranga pesta manerantany, dia nanapa-kevitra ny fihaonana, ny Karo-tsarintany faha-127 natao an-tserasera antoandro ka hatramin'ny faran'ny volana jona dia manasa ny vokatra an-tserasera an-trano sy any ivelany, mampiasa ny teknolojian'ny fampahalalam-baovao mandroso, manome fahazoan-dàlana an-tserasera 24 ora ho an'ny serivisy docking toy ny fifanakalozan-tserasera, mahatonga ny varotra avo lenta amin'ny varotra an-tserasera, manao baiko avy amin'ny Ny mpandraharaha an-trano sy ny vahiny dia tsy hiala ao an-trano intsony hanao raharaham-barotra.
Ny tolakandron'ny 23 aprily, dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mahazatra ny ministeran'ny varotra, ny valin'ny talen'ny jeneraly an'ny minisitry ny varotra ho an'ny mpanao gazety dia namaly ny mpanao gazety tao amin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety momba ny Internet Canton Fair napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny fotoana, tery ny fotoana fiomanana, ahoana ny fivoaran'ny fampiratiana sy fampiroboroboana ny mpividy?
Araka ny toetra mampiavaka ny ny Karo-tsarintany faha-127 natao tao amin'ny Internet, nanomboka ny asa mahasarika famatsiam-bola sy fampirantiana izahay. Amin'izao fotoana izao, ny fandrosoana dia mandroso tsara, miaraka amin'ny maso manarona izao tontolo izao, ary ny fanasana dia nalefa ho an'ireo mpividy any ivelany mihoatra ny 400.000 izay nanatrika ny lanonana. Fair fair , toy ny sehatra iraisam-pirenena indostrialy sy ara-barotra, orinasan-tsena marobe, sns. Amin'ny alàlan'ny fantsona samihafa, manasa ireo olona tsy afaka nanatrika. Canton Fair Taloha noho ny fotoana na ny antony hafa, toy ny vidin'ny fitsangatsanganana dia tsy eo amin'ny fivoriana, ezaka hahasarika ny mpividy be dia be manerantany, handray baiko manamarina ny tsena dia mamorona toe-javatra mahasoa amin'ny orinasa. Mandritra izany fotoana izany, ampitombointsika ny hamafin'ny fanasana mpividy an-trano, manitatra ny sisan'ireo mpividy matihanina hanasa, hanitatra ny fanafarana, hanaisika hampiroborobo ny orinasam-barotra vahiny.
Momba ny olan'ny fifantohana amin'izao fotoana izao, ny fampirantiana B2B dia asa iray manan-danja amin'ny fotoana fohy dia mampiseho ny fampahalalana momba ny fifantohana, loharanom-pifandraisana iray, mifangaro, Canton Fair atao eo amin'ny tsenan'ny orinasa an-tserasera manampy amin'ny fitaovam-piadiana an-tserasera ihany koa dia hitazona ny endri-javatra sy tombony, mpividy an'arivony maro sy mpandrafitra ao anatin'ny 10 andro miovaova fifanakalozana matetika, samy mahasoa ny mpividy amin'ny fihenam-bidy tokana, afaka manampy ihany koa ireo mpanao fampiratiana. paikady fivarotana, ireo mpividy mifantoka dia mitaky fanangonana fampahalalana, ny roa tonta dia mety mifanaraka amin'ny taona na mihoatra ny fotoana fividianana na famokarana sy drafi-piasana. Avy amin'ny fomba fijerin'ireo mpikarakara fampirantiana, ny mitazona ny fampirantiana ao anatin'ny fotoana voafetra dia manentana ny fanasana ireo mpividy an'izao tontolo izao handray anjara amin'ny fampirantiana, mampitombo ny fifantohana, manitatra ny fitaterana serasera, ary manome fotoana bebe kokoa ny raharaham-barotra amin'ny fifampiraharahana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanao fampirantiana.
Amin'ity taona ity Canton Fair dia hanamafy orina ny fanaovana matchmaking online, hanome fampahalalana marina amin'ny roa tonta, ary hamerina ny tontolon'ny fifampiraharahana eo amin'ny roa tonta. Manomeza fanampiana amin'ny fandikan-teny isan-karazany amin'ny sehatra docking ho fanamorana ny fifandraisan'ny mpividy sy mpanao fampirantiana. Ho an'ny tsirairay amin'ireo mpanao fampirantiana dia nanangana efitrano fampitana an-tserasera 24 ora, tsy afaka hifanatrehana fifampiraharahana ihany koa ianao, afaka mitondra publika.